Ogaden News Agency (ONA) – Qorshaha Wayaanaha ee dhul-boobka ah iyo feejignaanta CWXO
Posted by ONA Admin	/ October 31, 2011
Urur u dooda xuquuqda beeralayda yaryar oo lagu magacaabo GARAIN ayaa wuxuu caalamka u soo bandhigay habka ay xukuumadda Wayaanaha uga boobtay dhulkii ay dagaanaayeen shacabka Gambela uguna wareejisay shirkado. Ururka GRAIN wuxuu sheegay in laga soo bilaabo 2008dii ay xukuumadda Itobiya heshiis dhul wareejin ah la saxiixatay maalqabeeno ka kala socda Hindi, Sacuudi, Shiine iyo dalal kale. Heshiiska ayaa kala badh dhulkii ay lahaayeen shacabka Gambela lagu wareejiyay shirladahaa halka dadkii dalka lahaa laga barakiciyay.
Wasiirka beeraha ee Itobiya oo ah ninka suuq-geynaya dhulka wuxuu sheegay inay hayaan dhul beereed gaadhaya 3.9 milyan oo hektaar. Ogadenya waa ka mid dhul- beereedka qorshaha gorgortanka ugu jira Wayaanaha ee la doonayo in dadkii lahaa laga barakiciyo ka dibna shirkadahaa laga iibiyo.
Sidaan warbixina hore ku soo sheegnay, hadafka ay Itobiya ka lahayd heshiis beenaadkii ay ka saxiixeen wadaada ku sheega wuxuu ahaa in shirkadaha Sacuudiga oo ka caga jiiday nabad-galyo darteed inay dhulka Ogadenya yimaadaan lagu qanciyo inay Itixaad iyo ONLF-ba isa soo dhiibeen, waxaan ka ahayn inyaroo dibadda ka qayl-qaylinaya iyo xoogaa buuraha ku dhuumanaya oon dhibaato idiin gaysan karin.
Shirqoolkaa waxaa fashiliyay CWXO iyo shacabkii dhulka lahaa hasa ahaatee waa qorshe weli taagan oo loo baahan yahay in laga feejignaado khiyaanada lala maagan yahay shacabkeena oo qaar diin sheeganaya ay doonayaan inay dalaaliin ka noqdaan.
Daawo filimkan saad u fahamto.
Allow CJWXO noodaa hadaysan naftood u hurayaashaa aysan ahayn dhulkeena waa lala wareegi lahaa.